Cudurka jadeecada oo ku sii fidaya gobolka Minnesota - BBC News Somali
Cudurka jadeecada oo ku sii fidaya gobolka Minnesota
Saraakiisha caafimaadka ee gobolkaSaraakiisha caafimaadka ee gobolka Minnesota ee wadanka Maraykanka, ayaa sheegay in cudurka jadeecada ee ka dilaacay gobolkaasi uu sii faafayo oo uu gaadhay meeshii ugu xumamayd mudo ku siman 30 sanadood. ee wadanka Maraykanka, ayaa sheegay in cudurka jadeecada ee ka dilaacay gobolkaasi uu sii faafayo oo uu gaadhay meeshii ugu xumamayd mudo ku siman 30 sanadood.
Caruurta laga helay xanuunkaas ayaa badankoodu waxay yihiin caruur soomaali ah oo aan ka talaalayn xanuuska. Sidoo kale, saraakiisa caafimaadka gobolkaasi waxay ka codsadeen masuuliyiinta gobolka lacag dhan 5 milyan oo dollar oo wax lagaga qabto cudurka.
Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe, waa dhakhtar caafimaad oo ka hawl gala cisbitaalka Gaar gaar ee ku yaala gobolka Minnesota, wuxuuna u waramay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen, Shiine oo marka hore waydiiyay, bal heerka uu marayo xanuunkaa jadeecadu.